Somali daily News – SAWIRRO: Alshabaab oo soo bandhigay hub,gadii iyo rasaas ay ku qabsadeen dagaalkii Ruunirgood.
SAWIRRO: Alshabaab oo soo bandhigay hub,gadii iyo rasaas ay ku qabsadeen dagaalkii Ruunirgood.
dr.yare May 3, 2016 0
(xamarweyne.com):-Warbaahinta Alshabaab taageerta ayaa soo bandhigtay hub,gaadiid dagaal,rasaas iyo raashin ay kala wareegeen ciidamada Dowlada ee Ruunirgood.
Alshabaab waxay warkooda ku sheegteen inay laayeen askar badan oo kuwa dowlada ah kadib weerar xooggan oo laba maalin ka hor ay ku qabsadeen deegaanka ruunirgood ee Gobolka shabeelaha dhexe.
Sawirada alshabaab soo bandhigeen waxaa ka muuqanaya afar gaari oo laba yihiin cabdi bilayaal ay saaran yihiin qoryaha dhashiikaha loo yaqaan iyo laba gaari oo ah nuuca ciidamada lagu qaado ee xamuulka ah.
Sidoo kale waxay soo bandhigeen qoryo badan sida laba daba jeex ama BKM iyo laba baasuuke iyo aakayaal toban ku dhow ,sidoo kale rasaastii keydka u ahayd ciidamadaasi oo sandquuqyo ku jirta iyo raashin ayay soo bandhigeen.
Dhanka Dowlada ma jirto wax war ah oo ka soo baxay marka la eego sheegashada Alshabaab iyo soo bandhigidooda hubka.